तपाईंको जन्मबार कुन हो ? जन्मबारबाट थाहा हुन्छ भाग्य र स्वभाव « Khabarhub
तपाईंको जन्मबार कुन हो ? जन्मबारबाट थाहा हुन्छ भाग्य र स्वभाव
मानिसको स्वभाव उसको जन्म दिन वा वारका आधारमा हुने ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार एकै बार जन्मिएका महिला र पुरुषको स्वभाव र भाग्य समेत फरक फरक हुने गरेको छ । साताका ७ दिनको अर्थ र प्रभाव फरक फरक मानिएको छ । जन्मदिन अनुसार पनि मान्छेको स्वभाव र भाग्य निर्धारण हुने ज्योतिष शास्त्रको दावी छ ।
ज्योतिषका अनुसार जुन बार जन्मियो त्यो बारको ग्रहको प्रभाव जीवनका सबै पाटामा पर्छ । मान्छेको स्वभाव र भाग्य समेत जन्मबारले निर्धारण गर्ने गर्दछ ।
कस्तो हुन्छ कुन बार जन्मिनको मान्छेको स्वभाव र भाग्य ?
मंगलवार जन्म भएका स्त्री कठोर हृदयका हुन्छन् यस्ता स्त्रीमा दया माया कम हुन्छ । यस्ता स्त्री दुब्ला पातला र झगडालु समेत हुन्छन् ।
प्रकाशित मिति : ४ श्रावण २०७६, शनिबार ४ : ४८ बजे